MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardInternational Roaming FAQs mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
1.ပြည်ပခရီးထွက်ပါက ယခု မိမိလက်ရှိအသုံးပြုနေသောဖုန်းကို ယူဆောင်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား?
ပြည်ပခရီးထွက်ပါက ယခု မိမိလက်ရှိအသုံးပြုနေသောဖုန်းကို ဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်ပါပြီ။ GSM နှင့် WCDMA ကြိုတင်ငွေဖြည့်သုံးစွဲသူများမှာ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။ ဝန်ဆောင်မှုအား လျှောက်ထားရန် မလိုအပ်ပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်ရှိစဉ် ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုပါက မိမိနိုင်ငံတွင်း ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများနှင့် မတူညီပါ။
2. ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုခြင်းအတွက် နှုန်းထားတွေ ဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားပါသလဲ။ MPT ကဒ်တွေကို ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ အသုံးပြုလို့ရပါသလဲ?
နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှုန်းထားတွေနဲ့ ဖုန်းကဒ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့နိုင်ငံအမည်တွေကို MPTဝက်ဆိုက်ရဲ့ နိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှုဆိုင်ရာ စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြပေးထား ပါတယ်။http://mpt.com.mm/mm/home-mm/mobile-services-mm/roaming-international-calls-mm/ မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
3. တစ်ယောက်ယောက်စီကို ဖုန်းခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ တစ်ဖက်က ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ပြန်မဖြေဘဲ voice mail ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းဖြေကြားစက် (answering machine) နဲ့ဖုန်းလက်ခံထားလိုက်ရင် ဖုန်းခေါ်ဆိုခ ပေးဆောင် ရမှာလား?
ဟုတ်ကဲ့၊ဖုန်းခေါ်ဆိုခ ပေးရမှာပါ။ လူကြီးမင်းရဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို voice mail ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းဖြေကြားစက်က လက်ခံလိုက်ရင် ဖုန်းလက်ခံပြန်ကြားချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ၀န်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
4. နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကနေ ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေရယူနိုင်ပါသလဲ?
ရယူနိုင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကတော့ နိုင်ငံတွေနဲ့ အော်ပရေတာတွေပေါ် မူတည်ပြီး တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူပါဘူး။ ရနိုင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေအတွက် MPTရဲ့ အော်ပရေတာ စာရင်းကို http://mpt.com.mm/wp-content/uploads/ 2016/08/ Outbound-Roaming-Operator-List-Eng.pdf မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
5. နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရာမှာ ငွေဘယ်လိုဖြည့်ရမှာလဲ?
စီဘီဘဏ် ငွေဖြည့်ဝန်ဆောင်မှု ဒါမှမဟုတ် credit transfer/top up transfer ကနေ တဆင့် လူကြီးမင်းအတွက် ငွေဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အသိမိတ်ဆွေတစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးကို အကူအညီတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ MPT ရဲ့ နိုင်ငံတကာ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဝန်ဆောင််မှုကို ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခုကနေ အသုံးပြုမယ််ဆိုရင် လူကြီးမင်းရဲ့ ဖုန်းဘေလ်မှာ အနည်းဆုံး ကျပ် ၂၀,၀၀၀ဖြည့်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
6. ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုခြင်းအတွက် နှုန်းထားတွေ ဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားပါသလဲ။ MPT ကတ်တွေကို ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ အသုံးပြုလို့ပါသလဲ?
နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှုန်းထားတွေနဲ့ ဖုန်းကဒ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့နိုင်ငံအမည်တွေကို MPT ဝက်ဆိုက်ရဲ့ နိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှုဆိုင်ရာ စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြပေးထား ပါတယ်။http://mpt.com.mm/mm/home-mm/mobile-services-mm/roaming-international-calls-mm/ မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
7. တခြားနိုင်ငံတွေမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကို သုံးစွဲရာမှာ ဖုန်းအဝင်လက်ခံခြင်းနဲ့ အဝင် မက်ဆေ့ချ်တွေ အပေါ်မှာ ဝန်ဆောင်ခ ကောက်ခံပါသလား?
ဖုန်းအဝင်လက်ခံခြင်းအတွက် ၀န်ဆောင်ခကောက်ခံပါတယ်။မက်ဆေ့ချ်အဝင် လက်ခံခြင်းအတွက်တော့ ၀န်ဆောင်ခ မပေးရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံမှာ မ်ိုဘိုင်းဖုန်းကို အသုံးပြုနေတဲ့အချိန် မက်ဆေ့ချ်ပို့ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ၀န်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရမှာပါ။
8. နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရာမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ?
(IDD) (သို့) (+)၊ (သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံကုဒ်) နှင့် (မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို အရှေ့ဆုံးက သုည မပါဘဲ) နှိပ်ပြီး ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- မြန်မာမိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို ခေါ်မယ်ဆိုရင် (၀၀ ဒါမှမဟုတ် +)၊ (၉၅) နှင့် (မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို အရှေ့ဆုံးက သုညမပါဘဲ) ခေါ်ဆိုရမှာပါ။ စင်ကာပူမိုဘိုင်းဖုန်းကို ခေါ်မယ်ဆိုရင် (၀၀ ဒါမှမဟုတ် +)၊ (၆၅) နဲ့ (မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို ရှေ့ဆုံးက သုညမပါဘဲ )ခေါ်ဆိုရမှာပါ။
9. MPT ရဲ့ Prepaid နဲ့ Postpaid ကတ်တွေအတွက် နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို လျှောက်ထားတာတို့၊ ဝန်ဆောင်မှုစတင်ဖို့ activate လုပ်တာတို့ လိုအပ်ပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့၊ Prepaid အသုံးပြုသူတွေကတော့ ၁၃၃၂ကို <RMV ON> လို့ ရိုက်ပို့ပေးဖို့ လိုပါတယ်။Post paid အသုံးပြုသူတွေကတော့ MPTဆိုင် ( MPT brand shop) တွေမှာ ၀န်ဆောင်မှုကို တောင်းခံဖို့လိုပါတယ်။ Corporate Post Paid သုံးစွဲသူတွေကတော့ account manager တွေကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
10.Data Roaming Service ဆိုတာဘာလဲ?
Data Roaming Service ဆိုတာ တခြားနိုင်ငံက မိုဘိုင်းလ် ၀န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ တစ်ခုခုရဲ့ ကွန်ယက်မှာ သင့်ရဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကို အသုံးပြုနိုင်စေမယ့်ဝန်ဆောင်မှုပါ။ ဒီဝန်ဆောင်မှုကြောင့် သင်ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခု ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း MPT ကွန်ရက် အသုံးပြု အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု လိုအပ်တဲ့ အင်တာနက်နဲ့ Application တွေကို အသုံးပြုနိုင်သလို MPT အင်တာနက်ကွန်ရက်ပေါ်မှာ ဆက်ပြီးရှိနေနို်င်စေမှာပါ။ ဒီဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကျသင့်ငွေကို MPT ကသုံးစွဲသူထံမှ ကောက်ခံသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
11. MPT ရဲ့ ကြိုတင်ငွေဖြည့်စနစ်သုံးဆင်းမ်ကတ်နဲ့လစဉ်ပေးစနစ်သုံး ဆင်းမ်ကတ်တွေမှာ International Roaming Service ကိုရယူဖို့ ဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားရန် (သို့)activate လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား?
ကြိုတင်ငွေဖြည့်စနစ်သုံးဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုသူတွေကတော့ ၁၃၃၂ သို့ RMDON ဟု စာတိုပေးပို့ပြီး ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ဒီဝန်ဆောင်မှုကို ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ၁၃၃၂ သို့ RMDOFF ဟု စာတိုပေးပို့ရမှာပါ။ လစဉ်ပေးစနစ်သုံးဆင်းမ်ကတ် အသုံးပြုသူတွေကတော့ MPT အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်တွေကနေတဆင့် လျှောက်ထားရမှာပါ။ Corporate Post Paid သုံးစွဲသူတွေကတော့ သက်ဆိုင်ရာ B2B မန်နေဂျာကဆင့် ဆက်သွယ် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။